Akom-baovao DIRMRS Amoron’i Mania – Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques
Akom-baovao DIRMRS Amoron’i Mania
Atrikasa mitety Distrika ho fanamafisana ny fahaiza-manao ho an’ireo vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, sy fifampizarana ireo antotam-baovao mikasika ny fampandrosoana eny ifotony notanterahina tany amin’ny Faritra Amoron’i Mania.
Amin’ny maha-Faritra manan-karena ankibon’ny tany an’i Amoron’i Mania dia nandray anjara mavitrika ny Fitaleavam-paritra DRMRS Amoron’i Mania tamin’ny fampahafantarana ny lalana mifehy ny Harena ankibon’ny tany. Fihaonana nahafahana ihany koa nihainoana ny hetahetan’ireo Ben’ny tanana sy ireo mpanolotsainan’ny Kaominina.
Tao Fandriana ny 17 Novambra no notanterahana ny anjaran’ireo Ben’ny tanana sy mpanolotsaina tao amin’ny Distrika Fandriana;
Tao Ambositra kosa no notanterahina ny 19 Novambra ny fanofanana ireo Ben’ny tanana sy mpanolotsaina amin’ny Distrika Ambositra;
Ary tany Ambatofinandrahana no notanterahana ny fanofanana ny Ben’ny tanana ho an’ny Distrika Manandriana sy Ambatofinandrahana.
Tanjona hoy ny Loholon’i Madagasikara Sénateur RASOLONDRATSIMBA Raymond, nikarakara ny hetsika ny mba hisian’ny fifanomezan-tanana sy firaisan-kina amin’ny fanatanterahana ny Velirano hampandrosoana an’i Madagasikara izay tarihan’ny Filoha Andry RAJOELINA.
Fampitam-baovao sy sary : DRMRS Amoron’i Mania
← Fanambaram-pananana teny amin’ny birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly
Fitrandrahana Fatihita →